Nanamafy izany ny Solidarité des étudiants de la région SOFIA (SERS) tamin` ny alalan` ny filohany, Marco. Mbola maro dia maro ireo olona tsy tafody any amin` ny faritra misy azy. Tapitra anefa ny fe-potoana nomen` ny Filoham-pirenena izay dila tamin` ny 09 aprily teo ny fangatahana fahazoan-dalana. Nilaza izy fa ny zava-misy ankehitriny dia tsy hahafahan` ireo mpianatra mifantoka amin`ny fianarana. Misy ihany ireo malala-tanana manohana ireo mpianatra avy amin`ny faritra SOFIA amin`ny fampitaovana toy ny famatsiana PPN. Izany mariky ny firaisankina izany no mbola hahafahana ny mpianatra miatrika ny zava-misy aloha amin` izao fotoana izao.